İZTAŞIT Waxay Ka Baxday Seferihisar | RayHaber | raillynews
[24 / 02 / 2020] Xiisaha Weyn ee Istaraatiijiyada Istambul, Istaag ilaa Joojinta Tartan Aqooneedka	34 Istanbul
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirİZTAŞIT Waxay Ka Baxday Seferihisar
28 / 12 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY, VIDEO
iztasit seferihisardan wuu baxay
İZTAŞIT wuu ka baxay Seferihisar. Mashruucan, oo ay ku jiraan iskaashatada gaadiidka gawaarida, oo guud ahaan loogu adeego basaska, shabakadda gaadiidka dadweynaha ee Izmir, ayaa laga hirgalin doonaa dhammaan degmooyinka ku hareereysan Izmir.
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay saxeexday mashruuc muhiim ah oo kordhin doona fursadaha gaadiidka dadwaynaha ee degmooyinka ka baxsan bartamaha magaalada. Iskaashatada gaadiidka gawaarida, oo guud ahaan la shaqeeya basaska yar yar, ayaa lagu daray shabakadda gaadiidka dadweynaha ee İzmir. Tallaabada ugu horreysa ee mashruuca, oo ay fulisay Agaasimaha Guud ee ESHOT, waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo bandhigayey 28 Gaari oo cusub Seferihisar.
Isaga oo ka hadlayey xaflada, Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu carabka ku adkeeyay in mashruucan uu noqon doono mid kamid ah asaaska taariikhda gaadiidka magaalada. Duqa Magaalada Soyer wuxuu yiri, uz Waxaan u soo qaadanaynaa tayo sare, heerar sare iyo aqoonsi shirkadeed adeega gaadiidka dadweynaha ee ay iska kaashadeen degmooyinka ku xeeran. Halkii laga isticmaali lahaa basaska yar yar, basaska IZTA withIT oo ku qalabeysan tikniyoolajiyadda casriga, raaxada, deegaanka-saaxiibtinimo, naafo-saaxiibtinimo, qaboojiyaha, leh kamarad iyo dabaq hoose ayaa soo socda.
Dhamaan degmooyinka ku xeeran mustaqbalka dhow
Duqa Magaalada Soyer wuxuu sheegay in gaadiidka dadweynaha lagu bixin doono dhammaan degmooyinka ku hareereysan ee Izmir mustaqbalka dhow iyadoo la raacayo mashruuca 'ŞZTAŞIT'. Shirkadahayada xamuulkeena wata waxay heli doonaan aqoonsi shirkadeed iyo sharaf. Raaxo culus iyo raaxo ayaa loo heli doonaa muwaadiniinteenna. Gaariga ugu raaxada badan, had iyo jeerba wuu shaqeeyaa; Waxaan arki doonnaa in waqtiga sugitaanka ee muwaadiniinta kale ee nala shaqeeya ay aad u gaaban tahay. Intaa waxaa dheer, İZTAŞITs waxay u adeegi doonaan xaafadaha halkaas oo basaska ESHOT aysan horay u socon karin oo basaska yar yar ay shaqeeyaan. Xaqiiqda ah in gawaaridu ay hoos imaanayaan kormeerka ESHOT waxay dammaanad qaadi doontaa tayada iyo adeegga shirkadda ".
Duqa magaalada Soyer wuxuu cadeeyay in khadkaan lagu iibin doonin hindisooyin sida basaska dowliga ah ee gaar loo leeyahay. “Waxaan horumarin doonaa isla markaana aan balaarin doonnaa rootida milkiilayaasha iyo darawallada ganacsatadayada. Sababtoo ah waxaan nahay degmooyinka dadka. Mid ka mid ah himilooyinkeenna ugu weyn waa in aan kordhinno barwaaqada Izmir oo dhan iyo in aan barwaaqadaan si caddaalad ah ugu qaybinno magaalada oo dhan. ”
Duqa Magaalada Seferihisar Ismaaciil Adult, ayaa noqon doona magaalada ugu weyn ee loo weeciyo mashruucan oo ka bilaaban doonta Seferihisar'dan ku noolaashaha, ayuu yidhi. "Waxaan siin doonnaa nooc kasta oo taageero ah si loogu guuleysto mashruuca iyo qanacsanaanta muwaadiniinta aan isla wadaagno."
Dhamaadka xaflada, basaska İZTAŞIT ayaa la galiyay shaqada iyagoo jarjaraya feeraha. Duqa magaalada Soyer, xubnaha borotokoolka iyo muwaaddiniintu waxay soo bandhigeen socdaalkii magaalada iyagoo tuuraya "ZTAŞIT'lar".
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeyb galay muwaadiniinta Seferihisarl representatives iyo wakiilo badan oo iskaashato gawaarida xamuulka qaada ee magaalada aszmir iyo sidoo kale ChP İzmir kuxigeenka Kani Beko, Duqa magaalada Seferihisar İsmail Adult, Duqa Bayraklı Serdar Sandal, Duqa magaalada Güzelbahçe Mustafa İnce iyo Duqa magaalada Menderes Mustafa Kayalar.
ESHOT waxay ka dhigtay mid ku habboon gaadiidka dadweynaha
Shirkadaha gaadiidleyda Seferihisar'da ee ku shaqeeya sida lagu kala firdhiyey magaca SS 43 Maya. Milkiilayaasha gawaarida ayaa iibsaday 28 bas oo cusub oo nooc kasta leh. Gawaarida waxaa loo diyaariyay iyada oo la raacayo gaadiidka dadweynaha gudaha Inciralti Garage ee Agaasimaha Guud ee ESHOT.
Fadhiga kaarka Izmirim Card
Duullimaadyada İZTAŞIT waxay bilaabi doonaan inta udhaxeysa Seferihisar iyo İzmir ilaa 29ka Diseembar 2019 Axada. Sida dhammaan gaadiidka dadweynaha, İZTAŞITs waxaa lagu raaci doonaa boardzmirim Card. Jadwalka wakhtiyada waxaa lagu daawan karaa websaydhka ESHOT iyo arjiga ESHOT, kaas oo lagu rakibi karo telefoonnada casriga ah.
Naafada ah iyo wixii ka weyn 65
40 boqolkiiba ama ka badan ayaa heysta dadka naafada ah ee xaq u leh inay raacaan basaska ESHOT 'lacag la'aan ah', wehelka dadka aad u naafada ah iyo muwaadiniinta ka weyn 65; Xarunta kaararka ESHOT'un ee ku taal Konak iyo Agaasinka Adeegyada IMM Seferihisar ayaa lacag la’aan ah oo ay ku heli karaan kaarka Izmirim oo leh sawirro ay siinayaan guddiga Izmir İZTAŞIT'ların.
ESHOT waa la kormeeri doonaa
Gawaarida, wadayaasha iyo maamulka iskaashiga waxaa kormeeri doona ESHOT. Dhammaan tababarada la siiyo darawalada ESHOT waxaa la siin doonaa darawallada ŞZTAŞIT si joogto ah. Qorsheynta gaadiidka waxaa sameyn doona ESHOT. Xog aruurinta aaladda aruurinta lacagta (ansaxinta) ee lagu rakibay inZTAŞIT waxaa arki doona labada milkiileyaasha gawaarida iyo Qeybta Xogta ee Agaasinka Guud ee ESHOT. Wadarta daqliga iyo baadka bilaashka ah ee gaari kasta waxaa la siin doonaa milkiilayaasha gaariga bil walba.
Safarro isdaba joog ah oo xaafad walba
Khadadka Seferihisar-İzmir iyo Ürkmez-İzmir iyo adeegga gaadiidka dadweynaha ee Seferihisar waxaa bixin doona oo keliya basaska İZTAŞIT. IZTAŞIT'ların ma aadi doono xaafada si joogto ah uma shaqeyn doono. Khataraha ay sababaan gawaarida yar yar ee taraafikada ayaa dhamaan doona. Joogtada ESHOT ee hadda jira waxaa adeegsan doona'ZTAŞITs '. İZTAŞITs waxay ku adeegi doonaan khadadka soo socda:
975 Seferihisar - F. Altay (Ulamis ma galo)
985 Seferihisar waxaa qoray F. Altay
989 Orhanli ilaa Seferihisar
990 Rag - Seferihisar
Sideed mitir dherer, İZTAŞIT waxay leedahay 21 rakaab ah, 60 ka mid ah waa deganeyaal. Oo lagu qalabeeyay tikniyoolajiyaddii ugu dambaysay, raaxo leh, shuruudaha ka-saaridda Euro 6, naafa-nacaybka, hawo qaboojiyaha, kamaradda iyo basaska dabaqyada hoose, Thanks to aaladda GPRS waxay la jaan qaadeysaa nidaamka dabagalka diyaaradaha.
Shaqaalaha Hazelnut Ka soocaan Diyarbakir oo Tareen leh
Muddada İZTAŞIT Waxay Bilaabataa Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
ExpZTAŞIT Baahiyaha Duulimaadka
Tareenka Luqadda Turkigu wuu ka baxayaa
SHNUMX iyo T1 ayaa la dhigey ka dib markii ay baska raaceen Bursa T2
Waddada TCDD ee Mashruuca dekedda Haydarpaşa
Kontoroomyada Ugu Horeeya Adkeysiga
Shabakada gaadiidka dadweynaha ee İzmir